Kabsado Nexus 4 lumay ama la tirtiro Photos iyo Videos ismariyaan
> Resource > Ladnaansho > Nexus 4 Data Ladnaansho: Ladnaansho Nexus 4 lumay ama la tirtiro Photos iyo Videos
Sidee inuu ka soo kabsado masaxay ama lumay Xogta laga Nexus 4?
Dambeeyay Google ee Nexus-ku tilmaamay phone Android "Nexus 4" ayaa la sii daayay ayaa dhawaan. Iyada oo ay bandhigay qeexitaanka sare, 8-megapixel camera gadaal iyo sidoo kale Android 4.2 OS cusub, Nexus 4 waa kaamil ah la qaadi karo xarunta warbaahinta. Sidaa daraadeed, waxaad si fudud u quusin karo naftaada adduunka madadaalada midabo galay. Si kastaba ha ahaatee, weli waa lama huraan in ay lumiyaan faylasha sida sawiro, videos, iyo music ka Nexus 4 sabab u tirtirka l shil ah.
Marka uu aqrinayo arrimaha khasaaro file, aad u baahan tahay si ay u qaado si fudud ugu horeysay. All inaad samayso waa in aad joojiso qaadashada Nexus 4 Oo waxaad heli doontaa mid ka mid Nexus 4 software kabashada xog lagu kalsoonaan karo si loo soo celiyo aad files lumay sida ugu dhakhsaha badan ee aad u awoodo. Halkan waa talo: Wondershare Photo Recovery , ama Wondershare Photo Recovery for Mac . Iyada oo taageero ka barnaamijkan, ayaad ugu soo kaban karto sawiro lumay ama la tirtiro, video iyo music ka Nexus 4. Iyadoo la kaashanayo ee ay interface user-friendly iyo tayada fududahay in la isticmaalo, waxaad ka heli doontaa soo kabashada xogta mar dambe waa shaqo adag.
Waxaad kala soo bixi kartaa version maxkamad of Nexus 4 Data Recovery ah in ay isku day ah. Version maxkamada ayaa kuu saamaxayaa inaad ku eegaan files ka hor soo kabashada iyo hubi in helay files waa waxa aad rabto inuu ka soo kabsado ama aan.
3 Talaabada inay Qabtaan Nexus 4 Data Recovery
In socda, waxaana dooneynaa in ay u sheegto sida ay u isticmaalaan Nexus 4 Data Recovery inuu ka soo kabsado files. Haddii aad tahay qof user Mac ah, fadlan isku day version Mac ah.
Tallaabada 1 Connect aad Nexus 4 kombiyuutarka iyo bandhigista Wondershare Photo Recovery
Ku rakib Wondershare Photo Recovery on your computer. Markaas xiriiriyaan Nexus 4 ilaa computer la cable USB ah. Burcad barnaamijka iyo waxaad arki doontaa interface ah taas oo muujinaysa edbinta qaabab file iyo qalabka ay taageerayaan. Guji "Start" si ay u bilaabaan Nexus 4 sawir ama kabashada video.
Fiiro gaar ah: Fadlan hubi in aad Nexus 4 waxaa lagu ogaan karaa sida drive a on your computer.
Tallaabada 2 Start in baarista Nexus 4
Si dhakhso ah waxaad arki doontaa interface ah sida image hoos ku soo bandhigayaa. Fadlan ka xulo Nexus 4 ka mid ah liiska drive oo guji "Scan" inaad raadiso sawiro iyo videos lumay.
Fiiro gaar ah: Waxaad sidoo kale riixi kartaa "Filter Options" si loo tijaabiyo scan ah.
Tallaabada 3 Falanqeynta Kulanka Xiisaha Leh ceshan Nexus 4 xogta eegista
Ka dib markii dhowr Nexus 4, dhammaan faylasha recoverable la soo daabici doonaa in 3 qaybood: "Audio", "Photo" iyo "Video". Waxaad ku eegaan kartaa waxyaabaha asalka. Ka dib hubinta faylasha aad rabto inuu ka soo kabsado, waxaad riixi kartaa "Ladnaansho" iyaga badbaadiya on your computer.
Fiiro gaar ah: Fadlan ha badbaadiyo files soo kabsaday straightly galay aad Nexus 4. Haddii kale, soo kabashada guuldareystaan ​​laga yaabaa. Fadlan iyaga ku badbaadin si aad u computer ama qalab kale oo lagu kaydiyo.
1 Marka kabsaday files leh barnaamijkan, waxaad badbaadin kartaa natiijada la marsiiyey haddii aad rabto inuu ka soo kabsado helay files inta ay socoto dib u soo kabashada.
2 barnaamijka Tani ma aha oo kaliya qalab Nexus 4 kabashada xogta. Sidaa daraadeed, waxaad awoodi doontaa inay ka soo kabsadaan files lumay ama la tirtiro ka your computer, telefoonada mobile kale iyo noocyo kala duwan oo qalab kaydinta dibadda.
Video tutorial of Nexus kabashada 4 xogta
Recovery Dhibaatada Card Qmemory? Xalin!